Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » 2021 A kwanyeere nsọpụrụ maka ọgbakọ mba ụwa nke 37 nke IGLTA
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • LGBTQ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye mmeri njem nlegharị anya LGBTQ+ Matt Skallerud, onye ama ama njem LGBTQ+ Annette Kishon-Pines na Atlanta Black Pride Weekend ga-asọpụrụ n'oge Mgbakọ Mba nke 37 nke IGLTA.
Onye mmeri ogologo oge nke njem LGBTQ+ Matt Skallerud ga -enweta onyinye nturu ugo Hanns Ebensten.
Akụkọ mgbe ochie na njem nlegharị anya na ezigbo enyi LGBTQ+, Annette Kishon-Pines ga-enweta ihe nrite mbụ nke IGLTA.
Atlanta Black Pride Weekend ga -enweta ihe nrite Pathfinder nke 2021 nke IGLTA.
Mgbakọ Mba Nile nke 37 nke IGLTA na-ewere ọnọdụ na 8-11 Septemba, afọ a na-eme na nke mbụ ya n'Atlanta, Georgia
Ogidi atọ nke njem LGBTQ+, ịzụ ahịa na ike-Pink Media Matt Skallerud, Belmond's Annette Kishon-Pines na Atlanta Black Pride Weekend-ga-enweta afọ a IGLTA Ukpono. Ndị isi oche ndị otu họpụtara ya, a na -enye ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ azụmaahịa enyere aka ịkwalite ọdịdị ụwa maka Ndị njem LGBTQ+. A ga -enye nkwado IGLTA na nkwado mmesapụ aka nke Gaa Philadelphia na Mgbakọ ụwa nke 37 nke IGLTA, atọrọ maka Hotel Midtown, Atlanta, 8-11 Septemba.
Onye mmeri ogologo oge nke njem nlegharị anya LGBTQ+ Matt Skallerud ga -enweta Hanns Ebensten Hall of Fame Award, aha ya sitere na nwoke a na -ahụkarị dị ka nna njem nwoke nwere mmasị nwoke, onye a na -enye nsọpụrụ aha ya kwa afọ nye onye otu IGLTA pụrụ iche. Skallerud, onye isi oche Pink Media, bụ onye ama ama ma na -asọpụrụ ya maka ọrụ ike na -agwụ ya na ụlọ ọrụ njem na azụmaahịa, ọ bụkwa otu n'ime ndị ọkachamara kachasị n'ụwa na azụmaahịa njem LGBTQ+. N'ime ihe karịrị afọ 20, Skallerud enyerela ụlọ ọrụ nha niile aka iru ndị na-eri ihe n'ịntanetị LGBTQ+ ma lekwasị anya ugbu a n'ịmepụta ihe ọhụrụ zuru ụwa ọnụ na ịzụrụ mgbasa ozi mmemme, ịkparịta ụka n'Ịntanet na teknụzụ Web 2.0. Onye bụbu onye isi oche bọọdụ IGLTA, ọ bụ onye ama ama na Mgbakọ Mba Kwa Afọ nke otu ahụ, ebe ọ duzirila ọtụtụ ihe ngosi mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta maka ndị bịaranụ. O mekwara mmemme ịkparịta ụka n'igwe mgbasa ozi mbụ n'ime ọgbakọ IGLTA na 2008 na Las Vegas.
Akụkọ mgbe ochie na njem nlegharị anya na ezigbo enyi LGBTQ+, Annette Kishon-Pines ga-enweta ihe nrite mbụ nke IGLTA. Enyere nsọpụrụ a maka mmadụ, azụmaahịa ma ọ bụ nzukọ nke, n'agbanyeghị na ọ bụghị LGBTQ+, gosipụtara nkwa ogologo oge iji gbaa njem njem gụnyere, na-enyere aka melite ahụmịhe nke ndị njem LGBTQ+ n'ụwa niile. Kishon-Pines nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ na otu njem njem okomoko Belmond, na-eje ozi dị ka onye njikwa arụmọrụ ya na onye isi ahịa ahịa ụwa maka America. N’afọ 2015, ọ họpụtara onye isi raara onwe ya nye Belmond nke ahịa LGBTQ, otu afọ ka e mesịrị lekọta okike nke LGBTQ Advisory Board, nke mbụ ụdị ya na ụlọ ọrụ. N'ime afọ niile ọ nọrọ na Belmond, Kishon-Pines nyere ọtụtụ ndị nkwado ndabere LGBTQ + njem ndị nhazi, òtù ndị na -ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ na ndị ọrụ ebere, na -eje ozi dị ka ọkụ nke njikọta n'ime ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Atlanta Black Pride Weekend - otu n'ime ememme Black Pride kachasị n'ụwa - ga -enweta onyinye Pathfinder nke IGLTA nke 2021, nye onye, ​​azụmahịa, ma ọ bụ nzukọ na -enwe mmetụta dị mma na ebe ha na -aga, na igosipụta ọkwa kacha mma na ile ọbịa. Obodo LGBTQ+. Ọla okpueze nke ihe omume a bụ ememme Pure Heat Community anaghị akwụ ụgwọ, nke na-enye mmemme nnabata n'efu nke jupụtara na egwu, ntụrụndụ, nri na ihe ọchị, na-achọ ịkwalite nkwukọrịta, na-enye ndị nlereanya dị mma, na-eme ka mmadụ niile nwee ike, ma na-emegide ajọ mbunobi n'ime. ndị LGBTQ+ na obodo jikọrọ aka. IGLTA na -akwado ememme Community Pure Heat Community n'afọ a, yana mgbakọ ya.
Mgbakọ Mba Nile nke 37 nke IGLTA na-ewere ọnọdụ na 8-11 Septemba, afọ a na-eme na nke mbụ ya n'Atlanta, Georgia.